Kabaha haweenka | Quruxda | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Waa maxay sababta kabaha loo iibsado inta badan ma xirna?
Kabaha ayaa ku haboon - xitaa kororka
Kabaha Talyaanigu waxay leeyihiin caadooyin dheer
Maxaa ka dhigaya kabaha talyaaniga ee ka duwan kuwa kale?
Kabaha haweenka ee jilicsan
Dumarka badankoodu waxay leeyihiin kabo badan oo ka badan ragga, laakiin maxaad uga tagtay qolka xitaa wakhti dheer iyada oo aan la xidhin? Tusaale ahaan, sahan online ah ayaa lagu ogaadey in dumarku ay isku celcelis ahaan laba jeer isku celceliyaan sida kabaha ragga.
Dumarka iyo Kabaha - Mid ka mid ah baararka weyn ee caalamka
Rugaha kabaha haweenka ayaa ah, sida laga soo xigtay sahanka labada kabood ee 17, ragga waxay ku saabsan yihiin labada lamaane 8. Laakiin waa maxay sababta? Taasi ma waxay tahay sababta ay haweenku u jecelyihiin inay tagaan? Xaqiiqdu waxay tahay mid ka mid ah sababaha farqiga weyn, laakiin sida ay qabaan cilmi-nafsiyaadka waxaa jira waxyaabo aad u kala duwan oo qarsoon.
Dumarka iyo kabaha
Maxay dumar badan u xidhaan kabo?
Maaha oo kaliya kabaha kabaha haweenka ayaa lagu ogaan karaa sahanka, laakiin sidoo kale xaqiiqda ah in kabaha badan aan la xirin. Dumarka waxay jecelyihiin in ay dukaamaystaan, iyo marka ay rabaan inay isbeddelaan ama dhibaato yeeshaan, qalabkii hore ee badanaaba waa suuqa.
Xaqiiqda ah inay inta badan iibsadaan kabo laakiin ma xirna way adag tahay in nin fahmo. Sababtoo ah kuwan xishoodka ah waxay ka iibsanayaan dukaamada waxayna dareenka iyo dareenkooda ku soo bandhigaan marxaladaha kale, tusaale ahaan, inta lagu jiro ciyaaraha ama dhalada birta ah iyagoo daawanaya kubbadda cagta.
Adoo iibsanaya kabo cusub, waxay muujin karaan riyadooda iyo dareenadooda. Tani waxay la mid tahay isbeddelka timaha, taas oo inta badan ay sameeyaan haweenku haddii ay rabaan inay isbedelaan.
Laakiin maxaa sababtoo ah haween badan ma xidhaan kabahooda? Marka loo eego dhakhtarka cilminafsiga, ujeedada kabaha ma aha in ay xirtaan, laakiin waa in ay iska lahaadaan oo ku riixaan marka ay murugeysan yihiin. Si fudud u dareemida dareemaha kabo cusub ayaa muhiim u ah haweenka.
Intaa waxaa dheer, sabab loo soo iibsado kabo cusub, si ay ula socdaan isbedelka hadda. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa in caan ku ah TV-ga oo xiran kabaha laga soo qaado ururinta cusub ee naqshadeeyaha caanka ah iyo xaaskaaga ayaa doonaya in ay si sax ah u yeeshaan. Halkaan, ragga iyo dumarku way kala duwanyihiin, sababtoo ah niman badanaa ma daneeyaan kuwa ku duuban TV-ga iyo haddii ay urur cusub soo galaan suuqa.
Sababta kale ee kabaha haweenka haweenku waa inay naftooda ku abaalmariyaan. Tusaale ahaan, haddii wax laga xumaado, sida ku guulaysiga imtixaanka ama kor u qaadista.
Mid ayaa laga yaabaa in laga yaabo inay tahay sababta ay tahay kabo ay dumarku iibsadaan marka ay rabaan isbedel. Tani dhab ahaantii way fududahay in la sharaxo, sababtoo ah kabo mar walba taam ah, xitaa haddii miisaanka uu kordho.
Dharka, je joogta ama dusha, dhinaca kale, waxay noqon kartaa mid aad u adag, taas oo keenta in ay niyad jabto. Intaa waxaa dheer, ma jiraan dhab ahaan meelaha dhibaatooyinka dreaded ee cagaha. Iyo haddii meel aan sidaa ahayn, kabo xiran ayaa la iibsan karaa.
Waa maxay sababta bambo-gacmeedka iyo cidhibta dheer ee caansan?
Intaa waxaa dheer, kabo kale, bambooyin iyo ciribado badan ayaa si gaar ah loogu jecel yahay haweenka. Waxay sameeyaan lugaha muddo dheer waxayna dharbaaxaan, xaqiiqda ah inay aad muhiim ugu tahay haweenka. Sidaa daraadeed dareen yar oo ka mid ah jilbaha ayaa soo socda, oo la mid ah sida xiddigaha dillaacsan casaanka ah ee cidhiidhiga ah, xitaa haddii ay ku jirto xaaladdan intaa ka badan oo ka mid ah wadiiqadooda.
Talyaanigu waa mid ka mid ah qurba-joogta taariikhda dheer ee soo iibinta kabaha. Iyadoo daryeel weyn, kabaha Talyaaniga waxaa loo soo saaraa gacanta. Markii ugu horreysay, waxay ahayd labo jilaa oo kaliya oo ay sameeyeen shoemakers fudud oo fudud.
Kabaha talyaaniga waxaa lagu gartaa xarrago
Maanta, waxaa lagu soo saaraa mashiinka sababo kharashka, laakiin xitaa kuwan suuqyada ah ayaa wali la sameeyaa jacaylka caadiga ah ee talyaaniga iyo daryeelka cagaha. Macaamiishu waxay ka timaadaa dhammaan dhinacyada adduunka. Haddii aadan rabin inaad kabo ku iibsato Talyaaniga, waxaad sidoo kale dalban kartaa internetka ama waxaad tijaabin kartaa kabaha Talyaaniga, kabaha, kabaha iwm.
Kabaha Talyaaniga had iyo jeer waxay tayadoodu aad u fiican tahay. Waxay si fiican u shaqeeyaan. Dunta la xushay ayaa sidoo kale hubinaysa nolol waqti dheer. Moodooyinka quruxda badan leh waxay ku fiican yihiin ganacsi ama fiidkii. Ka sokow kabaha sidoo kale waa dhar khaas ah oo ka yimaada Talyaaniga, taas oo loo tixgelinayo waddanka uu asal ahaan kasoo jeedo. Sidaa darteed, gaar ahaan dharka iyo kabaha calaamadaha si fiican loo yaqaan, sida Gucci ama Prada waa kuwo caan ah. Laakiin sidoo kale lamaanayaasha Salvatore Ferragamo iyo Bruno Magli waxay qalbigooda garaacaan gaar ahaan dumarka.
Xaaladda kabaha talyaaniga waxaa lagu sharxi karaa erayo kooban: tayo sarre leh, sharaf leh, sharaf leh. Macaamiisha adduunka oo idil waxay ku tiirsan yihiin "Made in Italy" dharka. Waagii hore, kabahaasi wuxuu ahaa calaamad muuqaal dhab ah, macaamiishuna maanta way rajaynayaan shaqo-qabad fiican. Markii ay ahayd sharaf wayn oo muujiyay hantidooda iyo sumcaddooda kabaha Talyaaniga. Xitaa markaa, moodooyinka ayaa laga sameeyey kubka ugu wanaagsan ama riyaha ariga, taas oo loo tixgelinayo mid aad u jilicsan, caqli-gal ah iyo neefta.
Ragga iyo dumarku waxay la wadaagaan Talyaaniga, laakiin sidoo kale waxay jecelyihiin, jilicsanaanta iyo xiisaha. Hadday macaamiishu doortaan cayaaraha isboortiga, balerininka tooska ah, cidhibta sare ama cirifka sareeya, waxay dhammaantood muujiyaan dabeecada caadiga ah ee talyaaniga. Wadanku ma joojin horumarinta muddo dheer. Nidaamyada soo-saarka ee heer-soo-saarka ayaa hubiya in kabaha loo soo saaro caanaha macaamiisha. Xilliyada firaaqada iyo kabaha ganacsiga, moodooyinka ka yimaada Talyaaniga waxay u fiican yihiin dhinacyada isboortiga.
Bogagga midabaynta erotic ah ee dadka waaweyn - dumarka